Sida loo soo bixi YouTube video music iyo in Windows Media Player?
Jeclaada hit gabay cusub ee Beyonce oo aad rabto inaad si deg deg ah u soo bixi? Waa hagaag, degsado videos iyo Cajalado waa wax caadi ah haatan maalmood oo waxaa jira dhowr siyood oo aad u fududahay in ay sidaa sameeyaan. Windows Media Player hadda kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan tiro ka mid ah lagala soo bixi audio / video files si aad iyaga ka ciyaari kara ee kuu gaarka ah sahlo.
Qaybta 1aad: Sida loo soo bixi YouTube video music iyo in Windows Media Player?
Qeybta 2: qaabka ugu fiican u soo degsado YouTube videos?
Wixii soo degsado YouTube videos iyo music oo la ciyaaro Windows Media Player, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo file la doonayo dibna dajiyaan waxaa si aad Windows Media Player. Qaybta koowaad ku lug degsado la doonayo audio / video files. Waxaad kala soo bixi kartaa video YouTube ama audio laba siyaabood.
Habka 1: Isticmaal Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo waa wax soo saarka kama dambaysta ah in kulmi doona baahida music oo dhan. Waxaa gebi ahaanba waa software free in lagu rakibi karo on Windows iyo sidoo kale nidaamka ka hawlgala Mac. Raac tallaabooyinka hoose si aad u gashato bilaash ah oo wuxuu ku raaxaysan degsado YouTube videos iyo music.
Tallaabada 1 Ku rakib ka Wondershare software TunesGo
Fadlan booqo url soo socda si ay u soo bixi nooca ugu dambeeya ee Wondershare TunesGo software waayo habka ka hawlgala Windows ama Mac.
Marka laga reebo si deg deg ah ugu soo degsado files audio / video, waxa kale oo aad samayn kartaa waxyaabo badan oo muhiim ah la TunesGo Wondershare. Marka aad soo bixi Cajalado / videos internet ka, waxaad u timid guud ahaan tiro ka mid ah qaabab file qaar ka mid ah kuwaas oo xitaa ma ay taageerayaan aad ciyaaryahan. Si kastaba ha ahaatee iyadoo Wondershare TunesGo, waxaad si fudud u bedeli karaan qaabka file kasta oo galay qaabab habboon in la ciyaari karo via aad ciyaaryahan.
Tallaabada 2 Marka aad soo bixi oo si guul ah ku rakiban yihiin ay Wondershare software TunesGo, waxaad bilaabi kartaa sahaminta iyo soo degsado ah videos YouTube iyo music for free. Waxa kale oo aad ku dari kartaa kuwaas videos iyo Cajalado aad maktabadda galay si deg deg ah.
Tallaabada 3 Import faylasha bixi maktabadda
Habka 2: Isticmaal downloader online lacag la'aan ah
Marka laga reebo la isticmaalayo Wondershare TunesGo software u soo degsado ka videos YouTube, waxa kale oo aad ka fiirsan karto adigoo isticmaalaya downloader internetka laga heli karo isla ujeeddadaas. Hadda waxaad si fudud u soo dejisan kartaa videos YouTube qeexidda sare isticmaalaya qalabka internetka oo lacag la'aan ah si fudud ayaa lagu heli karaa internet-ka. Halkan waxaa ku qoran liiska 3 qalabka dajinta online sare oo aad isticmaali kartaa degsado tiro aan xad lahayn oo ah free videos YouTube:
• Keepvid: Keepvid waa heer sare ah oo waxtar leh, oo fudud oo bilaash ah software in kuu ogolaanayaa inaad soo bixi tiro aan xad lahayn ee YouTube videos lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Software waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac ka hawlgala nidaamyada.
• Zamzar: Zamzar waa mid ka mid ah ay software nooc kaas oo bixiya qaar ka mid ah muuqaalada in dadka isticmaala ay. The interface fudud aad u iyo faaiidada ka sameeyaan ka mid ah software ugu wanaagsan ee la heli karo degsado YouTube videos.
• Sii-Tube: Haddii degsado YouTube videos yahay oo dhan aad u baahan tahay, markaas Sii-Tube waa software ugu fiican, taas aawadeed. Wixii soo degsado ah videos YouTube iyada oo sii-Tube, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa, nuqul oo paste link YouTube oo riix badhanka download. Software ayaa soo bixi doona video si toos ah.
Inkastoo labada hab, kuwaas oo loo isticmaali karaa soo degsado YouTube videos, waxaad had iyo jeer jeclaan lahaa in la isticmaalo mid ka mid ah, kaas oo wax ku ool ah oo user-friendly. Wondershare TunesGo bixisaa macaamiisheeda leh adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin diinta qaab file, kala iibsiga ee files, dayactirka iyo nadiifinta maktabadaha music iwm, saasuuna marka aad kala soo bixi software TunesGo Wondershare, waxaad ka heli xamuulka ah qaababka kale.
Waxaan is barbardhigi kartaa dhexeeya qaababka degsado YouTube videos ku salaysan waxyaabahan soo socda:
• Download xawaaraha: Xawaaraha download of software Wondershare TunesGo waa badan marka loo eego tartanka. Horumarinta waxay leeyihiin dhiso software ah ee sidan oo kale in ay taageerto si degdeg ah degsado mar walba oo a.
• Download heerka guusha: Wondershare TunesGo taageertaa tiro ka mid ah qaabab file kaas oo ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee sababta heerka ay guul download waa mid qaali ah marka loo eego kale YouTube videos duuban qalabka. Waxaad kala soo bixi kartaa nooc kasta oo file video ka YouTube, ka dibna waxaa loogu badalo in ay qaabkan u file ku habboon la software ah isla TunesGo.
• hawlaha Pro: TunesGo Wondershare ku siinayaa qaar ka mid ah muuqaalada laga reebo kaliya degsado videos YouTube iyo files audio. Hadafka horumarinta TunesGo ahaa in ay ka gudbaan khasaaraha Lugood. Sidaas darteed, markii aad ka soo dejisan this software kama dambaysta ah ee ay Wondershare, ma aha oo kaliya in aad hesho xoriyad ay ku soo bixi tiro aan xad lahayn ee YouTube videos laakiin waxa kale oo aad iyaga ku dari kartaa in aad maktabadda, gub, maareeyaan iyaga, nadiifi oo u wareejiyo si aad qalab android ama macruufka si deg deg ah.
Sida loo Beddelaan AVCHD in YouTube qaabab socon
YouTube Cropper: Sida loo Dallaga YouTube Videos
Sida loo Download YouTube Videos si iPhone
Sida loo Download YouTube Videos on OS X Yosemite
9 Gaarka ah YouTube Maqaallo in mar dambe ma aad heli karaa
Download YouTube in qaab kasta ama Device aad rabto
Best YouTube Downloaders lagu talinayo: Desktop, Online, plugin iyo App
Sida loo Waraaqda Audio ka YouTube Effortlessly
Sida loo wadaag YouTube Video to Facebook Profile
> Resource > YouTube > Sida loo soo bixi YouTube video music iyo in Windows Media Player?